- ဗဟုသုတများတဲ့ စာပေတွေကို ဖတ်ခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုး။ တတ်သိနားလည်၊ ကျွမ်းကျင် အဆင့်တစ်တွေရဲ့ ပြောဆိုဆုံးမ၊ ပြုပြင် တည့်မတ်ပေးတဲ့စကားတွေကို နားထောင်ခြင်း၊ မသိတာကို မေးရဲခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုး။ စာဖတ်သိ၊ နားထောင်သိတွေကို အခြေခံပြီး ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ သိကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထပ်ဆင့် သိသွားတဲ့စိတ်။
- စာဖတ်ရမှာ ပျင်းတဲ့သူတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာတဲ့နေရာမှာ ၀ါသနာမပါတဲ့သူတွေ၊ မိမိမသိတာကို မေးရမှာ ရှက်ပြီး သိချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ သူတွေဟာ အသိဉာဏ် ကြီးမားကြွယ်ဝသူတွေ ကြားထဲမှာ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းတယ်လို့ ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ခံရမှာပဲ။
- ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်စေတသိက်တွေရဲ့သဘောကို အမှန်အတိုင်းသိတာ၊ ကြံစည်တာ၊ ပြောတာ၊ အသက်မွေးတာ၊ အားထုတ်တာ၊ အမှတ်ရတာ၊ စူးစိုက်တည်ကြည်တာ။ သစ္စာလေးပါးကို အမှန်အတိုင်း သိတာက တစ်မျိုး။ (ထောင်ပြထားတဲ့ လက်ဝါးတစ်ခုကို ကြည့်ပြီး လက်ဖ၀ါးဘက်မှာ ရှိတဲ့သူက သူမြင်တဲ့လက်ဖ၀ါးကို အမြင်မှန်တယ်လို့ ပြောနိုင်သလို၊ လက်ဖမိုးဘက်က လူကလည်း သူမြင်တဲ့ လက်ဖမိုးကို အမြင်မှန်တယ်လို့ ပြောတာကတစ်မျိုး။ ဒီနေရာမှာ ဘယ်သူကမှန်တယ်၊ ဘယ်သူ့အမြင်က မှားတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မိမိ မြင်တဲ့အမြင်ကနေ တစ်ဖက်လူရဲ့ အမြင်ဘက်ကို ငဲ့ကြည့်ပေးတတ်တဲ့ စိတ်မျိုးရှိပေးဖို့ပဲ လိုလိမ့်မယ်လို့ ယူဆတာကတစ်မျိုး။
အသင်ရော! အမြင်မှန်တယ်၊ အမြင်မှားတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မလဲ?)
- အစွဲအလမ်း ဖြစ်လွန်းတဲ့စိတ်က စိတ်မှာ အမြစ်တွယ်သလို ဖြစ်နေရင်တော့ ရအောင်ဖြတ်တဲ့နည်းကိုသုံးပြီး အမြစ်ပါသေအောင် ခုတ်ထစ်ပစ်ရမှာပဲ။ အစွဲအမြစ်က မသေဘဲကျန်နေရင် တဏှာစိတ်က ရေလာလောင်းပြီး အစွဲအပင် ပြန်ရှင်လာနိုင်တယ်။ အစွဲဖြတ်ချင်ရင် တဏှာလောဘ လိုချင်စိတ်ကိုပါဖြတ်။ တဏှာဖြတ်ချင်ရင် ခံစားစိတ်ကိုပါဖြတ်။ ခံစားစိတ်ကို ဖြတ်ချင်ရင် အာရုံခြောက်ပါးက စိတ်ချင်း စိတ်ချင်း လာထိတဲ့အချိန်ကို စောင့်ကြည့်သိမှတ်ပြီး ဆက်တိုက်ဖြတ်။ ဒါဆိုရင် အစွဲအပင် ရှင်သန်ခွင့်မရတော့ဘဲ တွယ်နေတဲ့ အမြစ်ပါသေပြီ။
အစွဲအလမ်းဖြစ်နေတဲ့ စိတ်သဘောကို သိကြည့်ခြင်း
- အမြတ်ထွက်မှန်းသိတဲ့ စိတ်ရော၊ အမြတ်ထုတ်တတ်တဲ့ စိတ်ရော၊ ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုက ကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲ ကြည့်ကြည့်၊ မကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲ ကြည့်ကြည့်၊ အရှုံးမရှိတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတဲ့ဘက်မှာ အမြတ်ထုတ်တတ်ရင်တော့ လူချင်းအတူတူ ပြီးတော့ သူ့အကျိုး၊ ကိုယ့်အကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူ၊ သိစရာမှန်သမျှတွေထဲက သိရမယ့်အသိတွေကို သိလို့ရသလောက် သိအောင် အားထုတ်နိုင်တယ်။ ဒါအမြတ်ပဲ။ အမြတ်ထုတ်တတ်လို့ အမြတ်ထွက်မှန်းသိတဲ့စိတ်။